Egwuregwu chess kacha mma maka PC | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | 09/04/2021 18:22 | Emelitere ka 09/04/2021 18:39 | General, Videogames
Ọ bụrụ na enwere egwuregwu egwuregwu mara mma ma na-atọ ọchị, nke uche anyị dị mkpa iji merie, nke ahụ bụ doro anya Chess, egwuregwu bọọdụ ebe atụmatụ na iche echiche banyere nke ọ bụla ga-abụ nke ọma iji mechie mmeri. Egwuregwu a hụrụ mmalite ya na 600/800 afọ mgbe Kraist gachara ma ọ bụ rue narị afọ nke XNUMX ka ọ banyere Spain site na ndị Arab. Obi abụọ adịghị ya, egwuregwu akụkọ ihe mere eme nke na-anọgide na-eto eto n'agbanyeghị na ọ nwụsịrị ọtụtụ uzuoku na afọ dijitalụ.
Ugbu a ọ bụ ihe a na-ahụkarị ka anyị hụ onye ọ bụla na-egwu egwuregwu Chess. N'oge nke ekwentị mkpanaaka na egwuregwu vidio, o yiri ka ọ siri ike ịhụ nwatakịrị nwoke na-eto eto ma ọ bụ nwoke na-egwu egwuregwu na bọọdụ kpochapụla, yabụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu egwu chess bụ ime ya n'ụdị vidiyo egwuregwu. Ma Ọ bụghị naanị egwuregwu, a na-ewere chess dị ka egwuregwu nke ọgụgụ isi na a na-egwuri egwu dị egwu n'ụwa niile na egwuregwu nwere ike iwe awa isii. N'isiokwu a, anyị ga-ahụ egwuregwu kacha mma kacha mma maka chess PC.
1 Chess egwuregwu maka PC
1.4 Zen Chess: Nwunye na Otu
1.6 Chered Chess
1.7 Isiokwu Simulator
2 Ebe nrụọrụ weebụ na-egwu cheesi
Chess egwuregwu maka PC
Anyị ga-akọwapụta n'ụzọ zuru ezu na obere egwuregwu ndị ahụ kachasị mma egwuregwu egwuregwu anyị nwere ike ịchọta na ikpo okwu PC, ha niile nwere ngwa akwụ ụgwọ ma ọ bụ n'efu nke nhọrọ ọkpụkpọ ahụ. Anyị nwere ike ịchọta site na egwuregwu a ma ama na akụkụ 2 ma ọ bụ egwuregwu tozuru oke karịa na akụkụ 3 na ezi uche ndịna.
Anyị na-amalite na otu nke chess egwuregwu na ndị kacha mma eserese, egwuregwu kachasị lekwasịrị anya na ndị egwuregwu ahụ nwere obere ahụmahụ bụ ndị chọrọ ịnụ ụtọ ahụmịhe dịka afọ ojuju n'anya. Mbụ ndị ukwu nke egwuregwu a kwadoro na-ekwu na nnukwu nchekwa data ụfọdụ n'ime ha, dị ka nnukwu Kasparov. Egwuregwu a na-enyocha ụzọ anyị si egwuri egwu itinye onwe anyị n'ọkwá ma dakọtara na ndị iro nke otu ọkwa anyị.
Anyị nwere ọgbakọ dị n'ime ebe anyị nwere ike ikpochapụ obi abụọ na ndị egwuregwu ndị ọzọ ma ọ bụ kwuo okwu banyere egwuregwu ha hụrụ na egwuregwu ndị ọzọ. Ma nke a oké egwuregwu bụ ya price na nke ahụ bụ na ọ na-efu € 50 n'ihi ya, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ egwuregwu ya price bụ a bit prohibitive ma ọ bụrụ na anyị na-achọ na-egwu otu egwuregwu.
Anyị emeela ka akụkụ nke egwuregwu nke egwuregwu gara aga pụta ìhè na Chess Ultra a abụghị ezigbo azụ na nke a, ebe ọ bụ otu n'ime egwuregwu chess na ngalaba kachasị mma na ndepụta ahụ. Egwuregwu ahụ nwere ike igosi anyị oyiyi ruo 4K afọ mkpebi. Ọ nwere otu ụdị ọkpụkpọ na nnukwu egwuregwu ọtụtụ ebe anyị nwere ike ịchọta onye na-ama anyị aka n'otu ntabi anya.
Ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ igwu egwu naanị, anyị nwere ọtụtụ usoro egwuregwu na ọgụgụ isi siri ike na-arụ ọrụ, na-enye anyị egwuregwu siri ike ma na-adịte aka dị ka a ga-asị na ọ bụ ezigbo egwuregwu. Egwuregwu a tụrụ aro maka onye ọ bụla chess fan. N'adịghị ka nke gara aga, nke a nwere ezigbo mma ahịa nke € 5,19 ugbu a Steam.
Anyị na-aga ugbu a egwuregwu mbụ na-akwụghị ụgwọ na ndepụta ahụ na ikekwe otu n'ime ihe kachasị mma ebe ọ na-enwe ma ngalaba teknụzụ dị mma na ezigbo nkọwa. Ọ na-enye nnukwu nkọwa zuru ezu na mbadamba na iberibe. Egwuregwu a bụ ihe ama ama n'etiti ndị bọọ chess n'ihi na ọ bụ n'efu na n'ihi nnukwu obodo na-eso ya.
Anyị nwere nsogbu dị iche iche iji nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu n'agbanyeghị agbanyeghị ikike anyị. Ọ na-atụ aro ka na-amalite na kasị ala ma ọ bụrụ na anyị na-nchara. Dị ka anyị kwuru ná mmalite, egwuregwu ahụ zuru oke na anyị nwere ike ibudata ya na gị Ibe weebụ.
Zen Chess: Nwunye na Otu
Anyị rutere na ihe bụ otu nke mfe na ọtụtụ nkenke egwuregwu na ndepụta, na a nnọọ minimalist imewe na na-echetara anyị karịa egwuregwu ekwentị karịa egwuregwu kọmputa, jiri akụkụ ihe osise dị mfe karị. Zen Chess a lekwasịrị anya na ndị na-egwu egwu na-achọ igwu egwu egwuregwu na-agba ọsọ na enweghị oke egwu.
nos anyị na-achọta ọtụtụ nsogbu iji merie nke ndị nna-ukwu kacha mma n'ụwa chessKa anyị na-aga n’ihu, ihe ịma aka na-esiwanyewanye ike, n’agbanyeghi na ebum n’uche anyị ka bụ otu, ka anyị wee tụlee ezigbo mmadụ n’otu oge iji mechaa merie egwuregwu ahụ. Ọnụ ya dịkwa mfe ma anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Steam maka € 0,99, a tụrụ aro nke ukwuu ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ naanị ikpori ndụ.
Lucas Chess bụ egwuregwu na-apụ apụ maka imeghe oghere, yabụ anyị nwere ike ibudata ya n'efu na weebụsaịtị ya. Anyị nwere ihe ruru egwuregwu iri anọ nke anyị nwere ike ịmalite na nke kachasị ala iji merie onwe anyị ruo mgbe anyị ga-egwu egwuregwu dịka ezigbo nna ukwu. Amamịghe echiche na-agbanwe n'ụzọ zuru oke na ọkwa siri ike ọ bụla Na ya kasị elu larịị, ọ na-enye anyị The Epic egwuregwu nke oké mma.
Anyị nwere ọtụtụ egwuregwu iji chee ndị egwuregwu sitere n'akụkụ ụwa niile nwere ezigbo mma. Egwuregwu atụmatụ ọtụtụ ntọala na nhazi n'ihi ya, anyị nwere ike gbanwee egwuregwu n'oge ọ bụla wee si otú ahụ ghara ịkwụsị egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na ihe adịghị ka anyị chọrọ.
Egwuregwu na-adọrọ mmasị ịmalite na ụwa chess, ebe ọ bụ mmemme emere site na maka mmụta. O nwere otutu onyinye puru iche na mpaghara ya maka idi mfe ya ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nsogbu, na-enye ohere mmegharị maka ụdị ọkpụkpọ ọ bụla. Ihe kachasị mma na mmemme a bụ na ọ bụ multiplatform na anyị nwere ike ịchọta ya na kọmputa na mobiles, yabụ a na-atụ aro ya nke ukwuu.
Nnukwu ntụpọ ya dị na ọnụahịa ahụ Ma ọ bụghị egwuregwu dị ọnụ ala, ọnụahịa ya bụ € 70 ọ bụ ezie na ọ nwere usoro ikpe ụbọchị 30 maka Mac ma ọ bụ Windows, ebe ụdị mkpanaka ahụ na-efu ihe dị ka € 10 ma nwee nsụgharị nweere onwe ya nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị nkịtị ndị egwuregwu.
Dị ka aha ya na-ekwu, ọ bụ nnukwu mbadamba ihe egwuregwu, ọ nweela ọtụtụ ewu ewu na nso nso a n'ihi egwuregwu dị iche iche dị iche iche, mana na-emesi ike egwuregwu chess ya. akwadoro n'ọtụtụ n'ime ọgbakọ ndị a raara nye cheesi. Egwuregwu a adịghị ka ndị ọzọ, egwuregwu a na-enye anyị ohere ịme egwuregwu nke masịrị anyị na iwu nke aka anyị, na-eme cheesi kwụsị chess.
Ọzọkwa, dị ka anyị kwurula, anyị nwere ike igwu egwu ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ dị egwu, dị ka ndị na-enyocha akwụkwọ, kaadị, dominoes ma ọ bụ ọbụna Warhammer. Anyị nwere ọnọdụ ịntanetị iji kpọọ egwuregwu megide ụwa niile site na sava Steam. Mkparịta ụka nke egwuregwu a bụ na ọ bụrụ na egwuregwu ahụ anaghị aga dịka anyị tụrụ anya ya, anyị nwere ike igosipụta iwe anyị niile megide bọọdụ egwuregwu ma mechie egwuregwu ahụ n'ụzọ siri ike, ọ bụ ezie na onye na-ama anyị aka nwere ike ọ gaghị atọ ọchị. Egwuregwu dị na Steam n'ihi na .19,99 54,99 na ya nkịtị version ma ọ bụ € 4 na ya XNUMX mkpọ version na-agụnye ya niile ọzọ ọdịnaya.
Ebe nrụọrụ weebụ na-egwu cheesi
N'ebe a, anyị ga-ahụ ụfọdụ weebụsaịtị ebe anyị nwere ike igwu egwu cheesi n'ịntanetị na-enweghị mkpa ịwụnye ngwa na kọmputa anyịAnyị enweghị obere ihe anyị chọrọ ebe ọ bụ na anyị ga-egwu site na nkwanye site na ihe nchọgharị weebụ kachasị amasị anyị.
Ebe nrụọrụ weebụ mara mma ma zuru ezu ebe anyị nwere ike ịchọta igwe egwuregwu egwuregwu na bọọdụ ọkwa ebe anyị nwere ike ịchọta ihe karịrị 5 nde egwuregwu si n'akụkụ nile nke ụwa. Ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu egwu n'ịntanetị, ọ ga-adaba na anyị na ndị na-asọmpi dịka ọkwa nka anyị si dị. Anyị nwere otu ọkpụkpọ mode nke anyị ga-ahọrọ nsogbu.
Ihe omume weebụ a nwere ọtụtụ ntọala maka egwuregwu, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe dị mfe mana ọ na-arụ ọrụ ọfụma yana nnukwu uru bụ na anyị nwere ike ịnweta ya site na ikpo okwu ọ bụla nke anyị nwere ihe nchọgharị weebụ.
Ndị ọzọ Ebe nrụọrụ weebụ a ma ama n'etiti ndị bọọlụ cheesi, na weebụsaịtị a anyị nwere ike ịnwale nka anyị na ndị egwuregwu ndị ọzọ dị n'ịntanetị, yana igwu egwu megide ọgụgụ isi siri ike. Anyị na-achọtakwa ọtụtụ ndụmọdụ na nkuzi iji meziwanye nkà anyị ma bụrụ ndị asọmpi na-arịwanye elu.
Ọ bụrụ na anyị ajụọ anyị na-achọta ụdị ozi na akwụkwọ dị iche iche nke kachasị mma chess nyere, yana bọọdụ akụkọ ebe anyị nwere ike ịchọta akụkọ niile gbasara chess ma ọ bụ ihe ndị na-abịanụ. Dịka weebụsaịtị gara aga, enwere ike iji nke ọ bụla na ngwaọrụ nwere ihe nchọgharị weebụ agbakwunyere, yabụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya site na mkpanaka anyị.
Ọ bụrụ na cheesi daa na anyị na-achọ mmetụta uche siri ike karị, anyị nwere ike ile anya na nke ọzọ video egwuregwu ndepụta ebe anyị na-ahụ ihe kasị mma ọgba tum tum egwuregwu maka PC. Ekwesịrị ikwu na anyị na-emeghe maka aro ọ bụla ma anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka na nkwupụta ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu chess kacha mma maka PC